Ny momba ny fifanarahana fisaraham-panambadiana any UAE | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny fifanarahana momba ny fisaraham-panambadiana ao UAE
Mety ho sarotra ny dinamika ao amin'ny fianakaviana rehefa mandeha ny taona. Na dia manomboka lehibe aza ny fanambadiana rehetra ary na dia amin'ny finiavana tsara aza, indraindray tsy mandeha araka ny efa nalamina ny zavatra. Rehefa mitranga izany dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra lehibe ianao raha handeha amin'ny fomba misaraka.
Inona no fifanarahana mampisaraka?
Fanoloran-tena sy fanampiana ny zaza
Ny fifanarahana fisaraham-panambadiana na fifanarahana fifanarahana dia antontan-taratasy voasoratra izay samy manana ny anarana mifototra amin'ny firenena na ny toerana misy azy.
Na izany aza, tsy maninona na inona na inona no niantsoana azy. Ny tanjon'ny fifanarahana fisaraham-panambadiana dia ny fahatsiarovana ny fifanarahana efa tratra teo amin'ny mpivady misara-bazana momba ny fifehezana ny zaza sy ny fanohanana, ny fiantrana, na ny fanohanan'ny vady ary ny fizarazarana.
Ny fisaraham-panambadiana dia tsy dingana tsotra tokony hizarana, mazàna feno fihetseham-po, fihenjanana ary fo mahakivy. Saingy miaraka amin'ny 25% ka hatramin'ny 30 isan-jaton'ny fanambadiana mifarana amin'ny fisaraham-panambadiana isan-taona, dia azo antoka fa tsy mahazatra izany tahaka ny eritreritrao, ary tsy irery ianao.
Arovy ny tenanao amin'ny fifanarahana ara-panambadiana
Tsy maintsy ilaina ny mitandrina anao amin'ny sonia fifanekena na inona na inona, ary mihoatra ny fisaraham-panambadiana. Rehefa vita ny sonia ilay fifanekena dia lasa fehezin'ny teny ianao, na dia miova aza ny fiainanao ary sarotra izany. Aza manantena ny hivezivezy mora foana amin'ny fifanarahana efa vita sonia.
Ny farany dia ny hoe na dia miady saina aza ianao dia tokony miditra amin'ny saina mazava sy ny fahatakarana feno fa momba ny sonia fifanekena ianao ary ho voafatin'ny teniny rehetra. Tena azo inoana fa hahatratra ny marimaritra iraisana ny roa tonta mba hahazoana ilay ampahany tadiaviny.
Tsy mitombina velively ny hanantena fa hahazo izay rehetra tadiavinao ianao ary tsy handray izay tadiaviny ny antoko hafa. Betsaka ny vidiny miaraka amin'ny sonia fifanarahana ary manana mpisolo vava ny fisaraham-panambadiana UAE dia zava-dehibe ny mijery zavatra alohan'ny hanaovanao zavatra.
Fantaro sy zarao ny fananana ary trosa
Amin'ny alàlan'ny fampahafantarana sy fizaràna ireo fananana sy trosa, ny zavatra voalohany tokony ho azonao dia ny endrika ara-dalàna ilaina avy amin'ny tranokalan'ny fanjakana, na ny tranokalan'ny fahamarinana. Toy ny fifanarahana ara-dalàna, dia mila milaza ny anaran'ny antoko feno voakasiky ny fifanarahana ianao, izay amin'ity tranga ity sy ianao mivady.
Hampidirinao koa ny antsipiriany rehetra mifandraika momba ny fanambadiana, izay ahitàna ny datin'ny fanambadiana, daty fisaraham-panambadiana, anarana, ary ny taonan'ny zanaky ny fanambadiana, ny antony fisaraham-panambadiana, ary ny fandaharana sy ny adiresinao amin'ny ankehitriny sy ny zava-misy ankehitriny toeran'ny zanakao na ny fananana tianao hotononina.
fantaro tsara ny karazana fananana sy trosa rehetra
Ny manaraka dia ny fanamafisana fa efa neken'ireo sy ny vadinao daholo ny fehezan-dalàna nisy tao anaty taratasy. Io fanekena io dia mahatonga ny fifanekena amin'ny ara-dalàna. Ny manaraka dia ny hamaritana tsara ny fananana sy ny trosany. Ny sasany dia hiaraka ary ny hafa manokana na manokana.
Amin'ny ankapobeny dia ny fananan'ny mpivady alohan'ny fanambadiana dia mbola azy ihany, fa na inona na inona azo mandritra ny fanambadiana miaraka amin'ny vola ara-panambadiana dia fananana fanambadiana na dia ny mpivady aza no nampiasainy. Ny fananana sy trosa tokana ihany no azo mizara.
Ny manaraka dia ny firesahana momba izay fifanarahana azonao rehefa momba ny zanakao. Tsy maintsy manapa-kevitra ianao hoe iza no mandray karama irery, fisaraham-panambadiana, na raha ny fatiantoka iraisana no tsara indrindra ho anao. Ny safidy nentim-paharazana matetika dia fiarovana irery, saingy maro amin'ireo misara-panambadiana no misafidy fandaharana raha ny zaza no miala amin'ny ray aman-dreny roa.
Farany, mila manosihosy ny fanohanana ny zaza sy ny fanohanan'ny spousal ianao. Na dia tsy azo esorina aza ny zon'ny ankizy hahazo fanampiana, saingy ny zonao manokana handray fanohanana ankosotra dia azo foanana.
5 Zavatra tokony hatao azo antoka fa tafiditra ao amin'ny fandaminana fisaraham-panambadiana
1. Ny fandaharam-potoana ho an'ny ray aman-dreny momba ny fitaizana
Matetika ireo mpanjifa ao amin'ny fifanarahana fisaraham-panambadiana dia mila drafitra lehibe momba ny fotoana fitaizan-janaka satria izany dia hanampy amin'ny fisorohana ny fifandirana amin'ny fotoana fitaizana. Ny fandaharam-potoana momba ny fitaizan-jaza dia zava-dehibe angatahana amin'ny famandrihana fisaraham-panambadiana ary mety hahitana ny fandaharam-potoana fialan-tsasatra amin'ny antsipirihany ka izany no manjo ny fanontaniana momba ny fahitsiana na manana zanaka amin'ny fialantsasatra manokana.
2. mamaritra ny fanohanana
Amin'ny tranga maro, ny fifanakalozana alimony sy ny fanampiana zaza dia fifanakalozana amin'ny andaniny sy ny ankilany. Tena ilaina tokoa ireo fepetra ireo mba hilazana ny fifanarahana fisaraham-panambadiana. Izany dia miantoka fa fantatry ny rehetra ny andraikiny.
3. Fiantohana fiainana
Raha ianao sy ny vadinao no tompon'antoka amin'ny fandoavana ny fanampiana ny zaza sy ny fiantrana, dia alao antoka fa tafiditra ao amin'ny fifanarahana fisaraham-panambadiana izay manome baiko ny vady izay mandoa ny fiantohana aina dia mitahiry vola ampy hahazoana ny andraikiny.
4. Kaonty fisotroan-dronono ary ahoana ny fizarana azy ireo
Ataovy azo antoka fa lisitry ny fananana fananan'ireo fisotroan-dronono ianao. Lazao amin'ny antsipiriany ny fomba fizarazarana ny fananana sy hoe iza avy ny fananana manokana.
5. drafitra amidy ny famarotana trano
Amin'ny fisaraham-panambadiana dia azo amidy amin'ny trano rehefa vita ny farany, na mety ho efa nifindra monina ny antoko iray. Na ahoana na ahoana, dia tokony ho antsipiriany ny famarotana ny trano ka afaka mandroso tsara ny fizotrany rehetra.
Maninona ianao no mila mpisolovava fisaraham-panambadiana za-draharaha any UAE mba hanomana fifanarahana fisaraham-panambadiana
Ny Lalànan'ny Fianakaviana ao UAE dia mihoatra noho ny fahazoan-dàlana ara-panambadiana amin'ny fitsarana. Ao koa ny fomba fisaraham-panambadiana, fitahirizana ny zaza, ary maro hafa. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fahazoanao mpisolo vava izay za-draharaha amin'ny lafiny rehetra amin'ny lalàna fisaraham-panambadiana sy fifanarahana.
Raha ny fikarakarana fifanarahana fisaraham-panambadiana dia tena ilaina ny manakarama mpisolovava za-draharaha amin'ny fikarakarana ny antontan-taratasy. Na izany aza, raha efa nomanin'ilay mpisolovava ny vadinao dia mila manakarà mpisolovava ianao hamerina izany ary hahazoana antoka fa miampy, ahitsy, na voafafa ny fepetra ara-dalàna rehetra, mba hiarovana ny zonao.
Ny andian-teny sasany toy ny "fananana irery," "fatiantoka ara-dalàna", "miala sy mandà ny fitakiana rehetra amin'ny ho avy," ary ny "fanamelohana ara-potoana sy tsy ahitan-doza", dia midika zavatra lehibe. Mpisolovava iray ihany no mahatakatra tsara ireo teny ireo sy ny fiantraikany amin'ny fifanarahana natolotra. Hataon'izy ireo antoka fa tsy hisy zavatra milatsaka ka tsy hiverenanao ny zo manan-danja.
Fanaraha-maso manokana avy amin'ny UAE Top Legal Expert